Mariela Carril | | ဂျီဘရောလ်, လမ်းပြ
စိတ်ကူးကိုကြိုက်လား ဒီကျောက်ဆောင်ကျောက်ဆောင် အင်္ဂလိပ်စာ၏လက်၌ရှိသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာပေမယ့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစပ်စုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလက်ခံရရှိသည်။ ထိုကျောက်တုံးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်သန်းပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ချက်ချင်းမဟာဗျူဟာပြားများတိုက်မိခဲ့သည့်အချိန်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသော monolithic ကျောက်တုံးများဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ဖြစ်သည့်ဆားငန်အိုင်ဖြစ်သည်။
3 Gibraltar မှာဘာတွေလည်ပတ်မှာလဲ
ကျောက် ၎င်းသည်အိုင်ဘာရီယန်ကျွန်းဆွယ်နှင့်သဲသမုဒ်အားဖြင့်ဆက်စပ်နေသည် သောရုပ်သံလိုင်းအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြတ်သည်။ ဒါဟာထုံးကျောက်နှင့် ၎င်းသည်အမြင့် ၄၂၆ မီတာအထိရောက်ရှိသည်။ ၁၈ ရာစုအစမှ စ၍ သူသည်ဗြိတိန်လက်အောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီးစပိန်ဆက်ခံခြင်းစစ်ပွဲအပြီးသရဖူရရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကအစအ ဦး မှာကဆိုသည် ၎င်းသည်ချက်ချင်းမဟာဆွဲငင်အားနှစ်ခုဖြစ်သောအာဖရိကနှင့်ယူရေးရှားလူမျိုးတို့၏တိုက်မိပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်လည်း Jurassic ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောမြေထဲပင်လယ်သည်ခန်းခြောက်သွားပြီးနောက်မှသာလျှင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည်ရေမရှိသောမြစ်ဝှမ်းကိုရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိနေသောမြေထဲပင်လယ်ကိုပုံသဏ္ဌာန်ကျစေရန်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
andais a,aaaaaaaaaandaa andaaaaaaaandaandaandaaaandaandaa ကျောက်သည်ကျိုးပဲ့သော်လည်း၊ ရေလက်ကြားသို့ထွက်သွားတဲ့ကျွန်းဆွယ်ဖွဲ့စည်းသည် စပိန်၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ဘူမိဗေဒကိုသိပြီးကျောက်တုံးများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုသိလျှင်ဤ site မှမြင်ကွင်းများသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်။
ဤကျောက်ဆောင်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုမှဆက်ပြောသည် လေနှင့်ရေတိုက်စားခြင်းသည်ဂူများကိုပုံသွင်းထားသည်တစ်ရာလောက်တော့မပိုပါဘူး။ ထိုသူတို့ထဲကအတော်များများဟာခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
မင်းလုပ်နိုင်တယ် လှေ, လေယာဉ်, လမ်းသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်္ဂလန်ကပုံမှန်လေကြောင်းလိုင်းရှိတယ်။ British Airways, EasyJet, Monarqch လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် Royal Air Maroc တို့ဖြင့်ပျံသန်းမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်စပိန်တွင်ရှိလျှင် Jerez, Seville သို့မဟုတ် Malaga ကိုရနိုင်သည် ထိုမှတစ်နာရီခွဲထက်မကလမ်းလျှောက်။ လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်ပါ။
ဒေသခံလေဆိပ်ဆိပ်ကမ်းကနေငါးမိနစ်သာကားမောင်းသည်။ ဆိပ်ကမ်းအကြောင်းပြောနေတာ သငျသညျခရုဇ်အားဖြင့်ကျောက်ကိုရနိုင်သည်။ ဥပမာကုမ္ပဏီများစွာ: Saga Cruises, HAL, P&O, Granc Circle Cruise Line, Regent Seas Seas များဥပမာ။ ရထားကိုစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့မှလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မက်ဒရစ်တွင်ရောက်နေလျှင်ညဘက် Algeciras သို့ Altaria ကိုသွားသည်။ ဒီရထားမှာပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းပါ
Algeciras ကိုရောက်ရင်ရထားဘူတာရုံရှေ့ဘက်မှာဘတ်စ်ကားစီးရတယ်။ နာရီဝက်လောက်က La Linea ကိုသွားပြီး Gibraltar နဲ့စပိန်နယ်စပ်ဖြစ်တယ်။ သငျသညျလမ်းလျှောက်ဖြတ်ကူးသောကြောင့်, ထိုအရပ်မှနာရီဝက် .. တွက်ချက်။ အလွန်လွယ်ကူ!
စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားလိုအပ်သည် သင်မဟုတ်လျှင်သင်၌aရှိရမည် တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ ၀ င်ရန်ဗီဇာလိုအပ်လျှင်ဂျီဘရောလ်ကိုခြေလျင်လျှောက်ရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပါ။
အမှန်တရားက၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောisရိယာဖြစ်သည် သင်အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်သည်အနည်းဆုံးမြို့နှင့်ကျောက်။ နယ်စပ်မှအလယ်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်မိနစ် ၂၀ ဖြစ်သည်ဥပမာသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသို့သင်သွားလျှင်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ အများဆုံးအထိုင်များသည် သင်အမြဲတမ်းအငှားယာဉ်သို့မဟုတ်ကူဝေးလွန်းကားစီးနိုင်သည်။ တက္ကစီများသည် gu ည့်လမ်းညွှန်အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊
ကေဘယ်လ်ကြိုးသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်သောရှုခင်းများကိုခံစားနိုင်ရန်ကျောက်တောင်ထိပ်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အခြေစိုက်စခန်းရှိဘူတာသည် Grand Parade တွင်တည်ရှိပြီးမြို့တောင်ဘက်ပိုင်းနှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၏ဘေးတွင်ရှိသည်။ ကျောက်ပေါ်မှာ အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများလည်းပြေးကြသည်.
La ဂျီဘရောလ်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး ၎င်းသည်ကျောက်၏အထက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊။ အမြင့် ၄၂၆ မီတာရှိကြောင်းသတိရပါ။ ဤအရပ်မှသင်ခရီးစဉ်ကိုသွားပြီးကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးဂူအချို့ကိုလည်ပတ်နိုင်သည် San Miguel ၏ဂူ၎င်းအနက်က၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်၍ ဥရောပနှင့်ချိတ်ဆက်သည်ဟုအမြဲတမ်းပြောခဲ့ဖူးသည်။ အမှန်တရားမှာဇာတ်ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဆေးရုံတောင်ရှိတယ်၊ မြေအောက်အခန်းတွေကလှတယ်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဤအခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူပေါင်း ၆၀၀ အတွက်စွမ်းရည်ရှိသောဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ဘဲလေးဂါလာများအတွက်ပရိသတ်များအတွက်ခန်းမအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဂူတစ်ခုကနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် Gornham ဂူNeanderthals ၏နောက်ဆုံးခိုလှုံရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။ ထိုအချိန်ကကမ်းရိုးတန်းမှ ၅ ကီလိုမီတာသာဝေးပြီး ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းရှိပါတယ် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှစတင်ခဲ့သောစင်္ကြံလမ်း၏ဓာတ်ဆီကွန်ယက်၏ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုဥမင်များ ၎င်းသည်ကာကွယ်ရေးစနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
မဟာဝိုင်းရံသည်ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင်နံပါတ် ၁၄ ကိုဝိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးစပိန်နှင့်ပြင်သစ်တို့၏ပိုင်နက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဇူလိုင် ၁၇၇၉ မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၈၃ အထိဖြစ်ပြီးလေးနှစ်လုံးလုံးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့၏အစိတ်အပိုင်း ဤပြခန်းများနှင့်စင်္ကြံများကိုအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည် - စုစုပေါင်းမီတာ ၃၀၀ စပိန်နိုင်ငံ၊ ကျွန်းဆွယ်များနှင့်ပင်လယ်အော်တို့ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်များပေးသောတွင်းအချို့ရှိသည်။ ဒါဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်မှုပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ရောမ၊ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်တို့သာဤတွင်လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြသည်။ အာရပ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြ ထိုသူတို့ကအတိုမဟုတ်ကြပေမယ့်နှစ်ပေါင်း 701! ထိုအချိန်ကတည်းကအဖြစ်လူသိများခံတပ် XNUMX ရာစုမှ Moorish ရဲတိုက်။ Torre del Homenaje ဟောင်းသည်အင်္ဂတေနှင့်အုတ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းရာစုနှစ်များကုန်လွန်သွားခြင်းကိုမြင့်မားစွာရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါသင်ပုံပြင်များစွာကြားရလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်သည်နိုင်ငံတော်၏အလံကို ၁၇၀၄ ခုနှစ်တွင်မြှင့်တင်ခဲ့သည်၊ ထိုအရာသည်နောက်တဖန်မလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပြုထားတဲ့လမ်းလျှောက်: ဒါခေါ် မြေထဲပင်လယ်၏ခြေလှမ်းများ။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် 1400 မီတာပြေး တစ်နာရီခွဲခွဲမှနှစ်နာရီခွဲအထိကြာသည့်အတော်လေးခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤနွေရာသီများ၌သို့မဟုတ်နေရောင်အရိပ်ရရန်နီးကပ်လာချိန်မနက်အစောပိုင်းတွင်စတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ နွေ ဦး ရာသီတွင်လမ်းကြောင်းသည်ပန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းသည်အလှတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိအမြင့် ၁၈၀ မီတာရှိသော Puerta de los Judíosမှကျောက်တောင်ထိပ်ရှိ ၄၁၉ မီတာအမြင့်ရှိ O'Hara ဘက်ထရီအထိဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမြင်များကိုခံစားရကျိုးနပ်တစ်ခုခုဖြစ်ကြပြီးသင်အချို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူနိုင်ပါတယ် ဂူ တစ်ချိန်ကသမိုင်းမ ၀ င်သောအမျိုးသားများ၊ ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးများ၊ ချောက် မူး, မျောက်နှင့် စစ်ရေးဘက်ထရီ ရာစုနှစ်များစွာ။ ဂျီဘရောလ်တာသည် ၁၅ ရက်ကြာနေထိုင်ရန်နေရာမဟုတ်သော်လည်း၊ နေ၊ အမြင်၊ သဘောသဘာဝနှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များကိုကမ်းလှမ်းသည့်နေ့ရက်နှစ်ရက်မှသုံးရက်အထိသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တည်းခိုခန်း? တည်းခိုရန်ဟိုတယ်များ၊ ခရီးသွား rental ည့်ငှားရမ်းအိမ်များ၊ လူငယ်တစ် ဦး ဘော်ဒါဆောင်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ တရားဝင်ဂျီဘရောလ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀ င်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ဂျီဘရောလ်သို့သွား.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဂျီဘရောလ် » Gibraltar ကျောက်သို့သွားပါ
သင်နွေရာသီတွင် Galicia ၌သင်ပြုရမည်